Ubuhle besifazane, ukunakekelwa kwesikhumba ebusweni
Ubuhle besifazane Ukunakekelwa ebusweni
Izwe liguqukile. Namuhla kuthathwa njengokujwayelekile ukuthi kubonakale kuncane kuneminyaka yabo. Ikakhulukazi ukulahla iminyaka kungenzeka ngokuthakazelisayo, ngokuphepha nangempumelelo futhi kubalulekile ukuqala into enkulu-kusuka kumuntu. Ngempela, ubuhle besifazane, ukunakekelwa kwesikhumba ebusweni - into eyinhloko kubo bonke abesifazane.
Ngisho noma ihlobo liphumula edolobheni ngaphandle kokuxwayisa, sizohlangana naye ehlomile ngokugcwele. Ngamunye wethu uyazi lapho angabheka khona izindiza ze-silk izingubo, ama-shoim, ama-shawls amancane, izintambo ezibonakalayo, izicathulo ezivulekile ... Noma kunjalo, kungakhathaliseki ukuthi ikhabethe liwufashini kangakanani, aligcini imibimbi, ngakho-ke kuqala okudingeka uzibeke ngokuhlelekile .
Abahlengikazi bezobuhle batusa ukuqala ebusweni - kubonisa konke ukucindezeleka nokukhathazeka, ukuvakashelwa kwe-solarium, ukungondleki nokuphila okungcolile kwemvelo. Ngakho-ke, zihlolisise esibukweni, bese uphendula imibuzo embalwa.
Emva kokudla okunye, ithoni lesikhumba lifaniswa nobuhle besifazane, ukunakekelwa kwesikhumba ebusweni kufuna okungcono kakhulu?
Ingabe unemibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo akho ongafihli i-concealer ebiza kakhulu?
Ingabe ubuso bakho bubonisa isidingo sokukuthumela eholidini?
Ngendlela, uke ube seholidini isikhathi esingakanani?
Ngobusuku bokugcina ulala ngaphansi kwamahora ayisishiyagalombili?
kule mpelasonto usuphinde udinge ukuya emsebenzini?
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, unemibimbi emisha?
Uma iningi lemibuzo oyiphendule ngokuqinisekisile, sekuyisikhathi sokubhalisela ukubonisana emtholampilo wokuhle. Izindaba ezinhle: zonke izinkinga zesikhumba eziyinkimbinkimbi, hhayi nje kuphela, ochwepheshe bazokwazi ukuxazulula ngaphandle kokusebenzisa izindlela ezinkulu. Phela, cosmetology yanamuhla isebenza izimangaliso. Isibonelo, i-mesotherapy ye-injection-free free kwi-device "Aktiderm" izobuyisela intsha elahlekile, ukubukeka okunempilo nokugqamile ngaphandle kwemigodi kanye nanoma yikuphi ukulandelana kwabo! Le ndlela isekelwe kwisimiso se-electroporation - ukwakheka kwama-electropores, lapho kungenzeka khona ukwethula izinto ezisebenzayo emaceleni nasezingxenyeni ezijulile zesikhumba. Yonke into ewusizo "i-Aktiderm" izothunyelwa emgodini ngaphandle kokulimaza izindonga zayo. Okunye okunye ukungabi nesikhathi sokuvuselela: ungabuyela emaphoyiseni akho emva kwenqubo. Ukuze kungabonakali nje imibimbi ebushelelezi, ukuqeda ukukhathala okungapheli, kodwa nokuhlinzeka ngokuphumelelayo isikhumba, ochwepheshe batusa ukuthatha inkambo ethi "Aktiderm" ngokuhambisana nezinqubo zokusakaza imishini. I-apparatus yemisebe yomswakama, esebenza phakathi kwe-collagen fibers, ibuyisela ukuqina kwesikhumba nokuqina. I-mesotherapy ye-injection ne-radiolifting akuyona yonke inqubo ohlwini lwendlela yokuguqula futhi ephephile yokuvuselela lapho umtholampilo omuhle ohamba phambili "i-Amazon" ngokukhethekile. Ngakho-ke, sakwazi ukunqoba impi ngesikhatsi futhi sinqoba thina. Manje ubuhle bethu nentsha yethu incike kithi kuphela!
Idivaysi ehlukile ye-non-induction meso-therapy. Ukusebenza kwalo kusekelwe endleleni ye-mesorporation, inikeze umklomelo weNobel.
Indlela yokwethula izinto ezisebenzayo esitokisini ngaphandle kokulimaza.
Isingeniso sezinto eziphilayo ezisebenzayo ezikhaleni ezingaphakathi nendawo eziphakathi kwesikhumba. I-Cosmetologists incoma ukuthi i-mesotherapy engeyona-injection "i-Aktiderm" njengendlela ephumelelayo nengenabuhlungu yesizukulwane esisha.
Indlela engeyona yokuhlinzwa yokuqinisa isikhumba ngosizo lwamagagasi amakhulu kagesi aphezulu. Ngenxa yokushisa ama-tissue, i-collagen fibers iba yinkimbinkimbi, icindezelwa - futhi isikhumba sibonakala sisuswe ngaphakathi.
Ubuhle obuvela ngaphakathi bubuye buzuze ngokuyinhloko ekulwa ukuze kubonakale kahle, ngakho-ke sincoma ukuthi uthathe amavithamini ngezikhathi ezithile, futhi emva kwalokho uzobukeka unhle kakhulu futhi isikhumba sizokhanyeka ngezempilo.
Izinqubo zokweqa isikhumba samajwabu amehlo
Izithelo zibhekene namaski ekhaya
Indlela yokukhipha ama-freckles ebusweni
Ukugeza i-oatmeal nomphumela walo esikhunjeni sobuso
Ama-Massage ebusweni bokubukeka
Izinhlobo ezahlukene zokwenza
Indlela yokuphathwa nge-acne ekhaleni?
Isaladi yama-courgettes anezintambo zikaphayini
Ingabe isisindo esiningi sithinta ukukhulelwa nokuvuthwa?
Konke mayelana nokudla kwe-Thai
Ungakugwema kanjani amaphutha ngosuku lokuqala?
Izinto zokuphulukisa nemilingo ye-hematite
Indlela Yokuthunga Ngaphambi Kokubeletha
Ukulondoloza ekhaya lamakati, izinja nezinye izilwane
Imibono engu-23 ngoFebhuwari 23
Ingaphakathi ekamelweni lokulala egcekeni le-Provence
I-salsa evela ku-ananas kanye ne-papaya
Kungcono nini ukukhulelwa?
Izikhathi zokudla neziphuzo kanye nezakhiwo zabo zokwelapha
Amakhekhe egazi ngesikhathi sokuya esikhathini
Ikhekhe elinomvini omhlophe
Iyiphi insimbi yomculo yokukhetha ingane?
I-Souvenirs-izifiso zoNyaka Omusha 2016 ngezandla zabo, iklasi elihle, ividiyo